Jules Kounde, Wesley Fofana Oo Ku Jira Liiska Daafaca Dhexe Ee Chelsea Dooneyso
HomeWararka CiyaarahaJules Kounde, Wesley Fofana oo ku jira liiska daafaca dhexe ee Chelsea Dooneyso
May 12, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Jules Kounde oo Sevilla ah iyo Wesley Fofana ee Leicester City ayaa lagu soo waramayaa inay ku jiraan liiska daafacyada dhexe ee Chelsea ka hor suuqa kala iibsiga xagaagan.
Blues ayaan haatan awoodin in ay ciyaartoy ka saxiixato ama ay heshiis cusub la gasho xiddigaha kooxda kowaad sabab la xidhiidha ganaaxa saaran mulkiilaha kooxda Roman Abramovich .
Chelsea ayaa ku dhawaaqday isbuucii hore in heshiis la gaaray koox uu hogaaminayo Todd Boehly si ay kooxda ula wareegaan, hadii heshiiska la soo gaba gabeeyo ka hor 31ka May, reer galbeedka London waxay awood u yeelan doonaan inay suuqa kala iibsiga ka dhex galaan xagaagan. .
Sida laga soo xigtay Evening Standard , madaxda Chelsea Marina Granovskaia iyo Petr Cech ayaa labada Kounde iyo Fofana u aqoonsaday inay yihiin bartilmaameedyo difaac oo macquul ah xagaagan, kuwaas oo hore loo aaminsan yahay inay ku jireen radarkooda in muddo ah.
Kounde, oo 23 jir ah, ayaa sidoo kale lala xiriiriyay kooxaha Barcelona iyo Manchester United , waxaana uu heshiis kula jiraa Sevilla ilaa June 2024.
Dhanka kale Fofana oo 21 jir ah ayaa sidoo kale lala xiriirinayay inuu ka tagayo, inkastoo uu heshiis cusub oo shan sano ah u saxiixay Leicester labo bilood ka hor, taasoo u kordhisay sii joogistiisa garoonka King Power Stadium ilaa June 2027.